पाँच घण्टाभन्दा बढी बच्चालाई स्कुलमा राख्दा शारीरिक र मनोवैज्ञानिक असर पर्छ ! – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated Jun 7, 201930
बालबालिकाको पहिलो विद्यालय भनेकै घर हो । त्यसपछि मात्र अरू शैक्षिक संस्था, शिक्षक अगाडि आउँछन् । एउटा बच्चा विद्यालय गएन तर घरमा राम्रो वातावरण पायो भने राम्रो व्यक्ति बन्न सक्छ तर घरबिनाको बच्चाले विद्यालय पाउँदैमा सफल हुन्छ भन्ने छैन । हामीले बालबालिकालाई सिर्जनशील बन्न सिकाउँदै छौँ कि कडा अनुशासनमा राख्न जोड दिँदैछौँ ? मिलन पाण्डेले एउटा लेखमा लेखेका थिए ‘विद्यार्थी प्रत्येक दिन स्कुल जाँदै छ, अनि आफ्नो सिर्जनशीलता गुमाएर फर्किंदै छ ।’
नेपालमा विद्यालय तहबाटै बालमस्तिष्कमाथि शासन सुरु गरिन्छ । उनीहरुलाई कैदी जस्तो बनाई नैतिकता र स्वतन्त्रताको पाठ पढाइन्छ । नेसनल सेन्टर फर टाइम एन्ड लर्निङको एउटा अनुसन्धानअनुसार आठ घण्टाको स्कुल समयमा विद्यार्थीहरु स्कुलमा प्रतिवर्ष दुई सय अतिरिक्त घण्टा खर्च गर्छन् । विज्ञहरु भन्छन्, ‘स्कुलमा धेरै समय बिताउँदा बालबालिकाको सिक्ने, शैक्षणिक उपलब्धि बढाउने र सामाजिक, आर्थिक उपलब्धिको ढोका बन्द हुन्छ ।’
८ देखि १० कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीहरू आठ बजे स्कुल जानका लागि सात बजे घरबाट हिँड्नुपर्छ । साँझ घर फर्किंदा पाँच बज्छ । ट्युसन क्लास वा अतिरिक्त कक्षा भनेर स्कुलमा बिहानबाट साँझसम्म विद्यार्थीहरू राख्ने गरिन्छ । लामो समय स्कुलमा समय बिताउँदा थकानको कारण न अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रभावकारी हुने गर्छ न शिक्षकले पढाएको नै प्रभावकारी हुन्छ । चाहविल बस्ने मनिषा पाण्डे भन्छिन्, ‘घर आएर छोरासँग बोल्ने पनि फुर्सद हुँुदैन । आएर होमवर्क गर्छ अनि सुत्छ । बिहान आठ बजेबाट स्कुल सुरु हुन्छ, साँझ पाँच बजे फर्किन्छ । तर परीक्षामा राम्रो नम्बर पनि ल्याएकोे हुँदैन । शिक्षकहरु पनि स्कुलमा फेल भयो, फेरि अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउनुपर्छ भन्छन् । न छिटो घर आउँछ न राम्रो नम्बर ल्याउँछ ।’
अभिभावकहरु घरमा छोराछोरीले दुःख दिन्छन् वा जागिरे भएको कारण छोराछोरीलाई ख्याल राख्न पाइँदैन भनेर लामो समयसम्म पढाइ हुने वा लामो समय राखिदिने स्कुल खोज्छन् । बच्चालाई स्कुलले राखिदिने ५, ६ घण्टा समय पनि थोरै हुन्छ ती अभिभावकलाई । तर ती अभिभावकले स्कुलमा धेरै समय रहने बच्चामा पर्ने नकारात्मक प्रभावबारे भने बुझेका हुँदैनन् ।
शिक्षाविद् टम हाइर्कले भनेका छन्, ‘२१औँ शताब्दीका विद्यार्थीलाई, २०औँ शताब्दीका शिक्षक, १९औँ शताब्दीको पाठ्यक्रम र १८औँ शताब्दीको विधिले पढाइँदै छ ।’ साना बालबालिकाले घर पुगेर खेल्ने अराम गर्ने टीभी हेर्ने समय नै पाउँदैनन् । बिहान गृहकार्य, दिनभरी स्कुल र साँझ फेरि गृहकार्य । स्कुलमा पनि ३०, ४० मिनेट खाजा खाने समय मुस्किलले छुट्टिन्छ । फिनल्यान्डको स्कुल समयमा विद्यार्थीलाई प्रत्येक घण्टा १५ मिनेट खेल्ने र उफ्रिने समय छुट्याइएको हुन्छ ।
मनोविज्ञ सन्देश ढकाल भन्छन्– ‘स्कुलको वातावरणमा पनि भर पर्छ । पढाउने, लेखाउने र थुनेर राख्ने मात्र क्रियाकलाप हुने स्कुलमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ नै ।’
‘ठूलो उमेरका विद्यार्थीका लागि एसईई वा अरू तहमा नतिजा देखाउने चलन छ । सङ्ख्यात्मक र मात्रात्मक हिसाबले नतिजा ल्याउनका लागि बिहानबाट साँझसम्म स्कुलमै राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले त्यो उमेरका बालबालिकाको खेल्ने र कुद्ने क्रियाकलाप पनि पढ्ने जत्तिकै आवश्यकता हो ।’
तर बिहानबाट बेलुकीसम्म विद्यालयकै रोहबरमा र नियन्त्रणमा राखेर पढाउँदा उनीहरुले गर्न पाउने सामान्य क्रियाकलाप पनि गर्न नपाउँदा विकासमा नकारात्मक असर पार्ने तर्क उनको छ ।
उनी भन्छन्, ‘स्कुलमा थाकेर आएको हुन्छ । घर आएर पनि केही गर्न सक्दैन । छरछिमेकमा पनि घुलमिल हुन सक्दैन । त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’
उनी भन्छन्– ‘कलिला उमेरका बालबालिकालाई परिवारको सम्पर्कबाट टाढा राख्नु भनेको आफैँमा नकारात्मक प्रभाव हो । बच्चालाई बाबुआमाको नजिक बस्नुपर्ने र खेल्नुपर्ने हुन्छ ।’
डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती हाइयर सेकेन्डरी स्कुलका भ्वाइस प्रिन्सिपल रामचन्द्र खनाल भन्छन्, ‘साना नानीलाई पाँच, छ घण्टाभन्दा बढी स्कुल राखिरहनु भनेको उनीहरुको मनोवैज्ञानिक, शारीरिक विकासको लागि उपयुक्त हुँदैन । किनभने धेरै समय स्कुलमा राख्नु पढाइरहुन भन्ने सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ तर लामो समय विद्यार्थीलाई स्कुलमा राख्दा पढाइप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ भन्ने ती अभिभावकलाई थाहा हुँदैन ।’
‘परिवारमा बच्चा सबैको आकर्षणको केन्द्र हुन्छ । विद्यालयमा हेर्ने र ख्याल गर्ने मान्छे त राखेको हुन्छ तर एकजना मान्छेले १५, २० जना बच्चा हेर्नुपर्छ ।’
‘धेरै समय स्कुल विताउने बच्चाको स्कुलमा गहिरो लगाव पनि हुँदैन । त्यो उमेरमा बालबालिको लगाव राम्रो हुन पाएन भने त्यतिबेला पूरा नभएको कुरा पछिसम्म असर देखिरहन्छ । कसैसँग नजिकको सम्बन्ध बनाउन नसक्ने भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्ने जस्ता समस्या पछि देखिन सक्छन् ।’
हाम्रो समाजमा बच्चा दुई वर्षको भएपछि स्कुल पठाइहाल्ने चलन छ भन्दै उनी भन्छन्, ‘पढाउने, लेखाउने र शारीरिक क्रियाकलाप पनि छ भने २, ३ घण्टा स्कुल पठाउने कुरा ठिकै हो तर ड्रेस लगाएर, झोला बोकेर दुई वर्षको बच्चालाई स्कुलमा पढाउने, लाइन लगाएर राख्ने गतिविधि भयो भने त्यसले नकारात्मक असर पर्छ ।
‘कुन तहको बच्चा हो, त्यसमा पनि भर पर्छ । विद्यार्थीलाई पढाउनेभन्दा अन्य क्रियाकलाप महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । लामो समयसम्म विद्यालयमा राख्दा बौद्धिक विकास हुन्छ भन्ने सोचाइ छ, त्यो गलत हो । पछिल्लो चरणमा विद्यार्थीहरु अल्छी हुुने पढाइलाई बोझ ठान्ने गर्छन् ।’
‘घरपरिवारमा पारिवारिक वातावरण हुन्छ । बच्चाहरु घुलमिल हुन्छन् । बस्न, हिँड्न र डुल्न पनि सजिलो हुन्छ । छरछिमेकमा स्वतन्त्र ढङ्गले खेल्ने, कुद्ने, बस्ने र अरू खालका मनोरञ्जनका काम पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले लामो समय स्कुलमा राख्दा नराम्रो असर पर्छ ।’
६ वर्षमुनिको बच्चालाई ३, ४ घण्टा र त्यो भन्दा माथिको बच्चालाई खाना खाने र खेल्ने समयलाई मिलाएर ५, ६ घण्टाभन्दा बढी समय स्कुलमा राख्नुहुँदैन भन्ने तर्क उनको छ ।